Sandals Royal Barbados: fanitarana manaitra amin'ny fotoana fahavaratra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Barbados » Sandals Royal Barbados: fanitarana manaitra amin'ny fotoana fahavaratra
Sandals Resorts International (SRI) dia manohy ny fivoarany any Karaiba as Sandal Royal Barbados mamaky tany amin'ny fanitarana vaovao manaitaitra, ara-potoana amin'ny vanin-taona mafana. Niorina amin'ny premiere 1 Jolay 2021, ny South Seas Village ao Sandals Royal Barbados dia hitoetra ao amin'ny efitrano vaovao 66, ka ho 338 ny isan'ireo efitrano, izay misy ny sonia Rondoval ™, Skypool ary Crystal Lagoon Swim-Up suite ary Millionaire Butler suite foto-kevitra; trano fisakafoanana ara-panahy vaovao roa, The Greenhouse Restaurant ary Heart & Sol kafe, ka nahatratra sivy ny trano fisakafoanana manaitra tao amin'ilay toeram-pialofana; ary dobo vaovao miala sasatra roa.
Eo anelanelan'ny zaridaina maitso sy ny morontsiraka fasika fotsy any Maxwell Beach, ny fampidirana amam-pitiavana be dia be dia be dia be ny efi-trano malalaka sy mamirapiratra, valindrihana avo lenta ary vita vita amin'ny hazavana vita amin'ny hazavana miaraka amin'ny lamba quartz - natao hialana, fialan-tsasatra ary fitoniana . Ny Village South Seas dia hisy ny fanolorana marika toy ny Sandals Tranquility Blissful Bed ™, miaraka amina farafara farafahakelin'ny mpanjaka, ampiarahina amin'ny rongony tena tsara sy ny lohan-ondana, ny fandroana marbra voaravaka, ny sy ny fantsony, kojakoja fandroana avy amin'ny Red Lane® Spa, Tranquility Soaking Tub ™ any ivelany manokana ho an'ny roa sy fisotroana feno ao amin'ny efitrano feno alikaola misy alikaola ao anatin'izany ny divay Robert Mondavi. Ireo efitrano fandraisam-bahiny ireo koa dia hampiseho ny aloka mainty, ny jiro mampitony ary ny rafitra aromatherapy ao amin'ny efitrano misy menaka manalefaka mampihena ny fiainana manokana amin'ny fofona ary hampiroborobo ny fialan-tsasatry ny alina mahafinaritra. Ireo vahiny izay mijanona ao amin'ny sokajy suite butler vaovao dia hankafy ihany koa ny mpitondra kapoaka manokana, serivisy 24-ora ary fisavana VIP.
“Sandals Royal Barbados no toeram-pialan-tsasatra farany farany ho an'ny mpivady izay mitady faran'izay tsara eo an-toerana. Nanampy efitrano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary dobo bebe kokoa izahay hampisondrotra ny safidinay izay manatsara kokoa ny traikefa efa nahazatra ny vahiny, "hoy i Adam Stewart, Filohan'ny Executive an'ny Sandals Resorts International. "Ity vaovao ity dia avy amin'ny fisondrotanay vao haingana tany Sandals South Coast, izay nahatonga ny Rondoval Suites voalohany amin'ny Swim-up any Jamaika ary vohitra Holandey amoron-dranomasina eritreritra indray, ary koa fananana vaovao ao Curaçao sy Saint Vincent ary Grenadines, manamarika nosy Karaiba sivy ho an'ny dian-tongotra Sandals Resorts International. Ity fotoana fanitarana tsy manam-paharoa ao amin'ny Sandals® Resorts ity dia zavatra iray reharehanay, satria manohy manangana ny bara amin'ny traikefa fialan-tsasatra Luxury Included® izahay ary manohana ny faritra tiantsika tokoa, ”hoy hatrany i Stewart.
The New South Seas Hideaway Crystal Lagoon Swim-up Butler Suite miaraka amin'ny Patio Tranquility Soaking Tub
Hevitra roa momba ny fandrahoan-tsakafo vaovao ihany koa no hampahafantarina ao amin'ny Sandals Royal Barbados, ka hahatratra sivy ny totalin'ny trano fisakafoanana ao amin'ilay hotely. Ny Greenhouse, toeram-pisakafoanana an-tsena iray any an-tanàn-dehibe, dia hanolotra nahandro kanto ho an'ny vahiny voaomana amin'ny hena voaangona sy hazan-dranomasina ary voankazo sy legioma avy any an-jaridaina. Heart and Sol, ny cafe an'ny resort, dia mampifangaro ny isan-karazany, ny hafainganana ary ny serivisy misy ny fomba any New York miaraka amin'ny tolotra mahandro sakafo avy any an-toerana ho an'ny safidy vaovao sy madio amin'ny sandwich, lasopy, salady, lovia malama, ary zezika feno otrikaina. voankazo sy ranom-boankazo sy ranom-boankazo.
Doboky ny rano fisotro madio vaovao roa no hapetraka ao amin'ny faritra milamina ao amin'ny South Seas Village. Ny dobo filomanosana iray dia hanana bar bisy feno serivisy manolotra cocktail ambany kaloria kely. Miaraka amin'ny tsiro isan-karazany hisafidianana, toy ny Ginger Mule, Brûléed Lemon Sour, Green Gin ary Cucumber Slush, ny vahiny dia afaka mankafy ny tsiro any Karaiba tsy misy tsiny.
Rehefa mijanona ao amin'ny Sandals Royal Barbados, ny vahiny dia manana tombony ihany koa amin'ny mpifanila vodirindrina aminy Sandal Barbados, mamorona fialantsasatra mega misy roa trano fandraisam-bahiny misy akony rehetra ho an'ny vidin'ny trano fisakafoanana 20 - totalin'ny trano fisakafoanana, fisotroana 14, dobo 11 ary tadio dimy.
Sandals Royal Barbados dia manaiky famandrihana ho an'ireo toeram-ponenana ireo amin'ny fahatongavany manomboka ny 1 Jolay 2021. Mba hamandrihana ny fialan-tsasatra Luxury Included® manaraka, boky an-tserasera na miantso 1-800-SANDALS.
Glasgow Green: University of Glasgow dia nanambara ny fikasana hampihenana ny fandefasana gazy karbonika amin'ny raharaham-barotra